Feeryahanka Muslimka ah ee Mike Tyson oo intuu bani’aadamka soo dhaafay doonay inuu xayawaanla dagaallamo – Gool FM
(New York) 18 Feb 2019. Horyaalkii hore ee feerka miisaanka culus ee Adduunyada Mike Tyson ayaa qirtay in uu hadda ka hor tegay xerada xayawaannada lagu xareeyo ee dadku u soo daawashada tagaan ee magaallada New York, kaddibna codsaday in loo fasaxo in uu la dagaallamo Daanyeerka weyn ee Gorilla.
1986-kii Mike Tyson oo markaa ahaa 20 jir ayaa waxa uu ninkii waardiyaha ka ahaa xadiiqadda xayawaannada New York ka codsaday in uu u ogolaado in uu gudaha u galo xeradaasi, isla markaana shabaqiisa kula soo dagaallamo nuuca ugu awoodda badan Daanyeerka Gorilla-ha ee loo yaqaanno (Silverback Gorilla), waxaana Tyson uu ninkii waardiyaha ahaa uu u ballan qaaday 10,000 oo dollar.
Tyson oo wareysi siinayay wargeyska ‘The Sun’ ayaa waxa uu sheegay in xilligaasi ay la socotay xaaskiisa Robin Givens, waxaana ay booqasho ku tageen goobta xayawaannada lagu xareeyo, markaas oo uu Tyson damcay in uu xooggiisa ku tijaabiyo xayawaankaasi awoodda badan.
Sanadkii 1986-kii waxa uu Tyson ku guuleystay suunkiisii ugu horreeyay ee WBC oo uu ka qaaday Trevor Berbick, waloow uu 1981 iyo 1982-kiina laba billadood oo dahab ah uu helay.
Daanyeerka Gorilla ayaa aad uga xoog badan aadanaha, waxaana nuuca labka ah ee Silverback Gorilla uu dallici karaa ama kor u qaadi karaa 815kg, halka bani’aadamka kan ugu xoogga badan, aadna u tababartay illaa iyo haatan inta la ogyahay uu qaadi karo 410kg.